निकै जोखिम र अनिश्चित बनेका स्वास्थकर्मी सुरक्षाकर्मी संचारकर्मी | AbcSanchar.com
निकै जोखिम र अनिश्चित बनेका स्वास्थकर्मी सुरक्षाकर्मी संचारकर्मी
प्रकशित मिति : २८ चैत्र २०७६, शुक्रबार ०९:०५
(सागर थापा/बिदुर एमसी)
६. नम्बर कर्णाली प्रदेशको सल्यान जिल्लाकाे कपुरकाेटमा लक डाउनकाे सङ्गिन पूर्ण अवस्थामा पनि स्वास्थ्यकर्मी ममता देवकोटासङ्ग कुरा गर्दै हामी सञ्चारकर्मिहरु ।
सरकारले सबै नागरिकहरुलाई लक डाउनकाे अवधिभर घरभित्र बस्ने अाव्हान गरेको छ र नागरिकहरुले पनि उक्त लक डाउनकाे पूर्ण रूपमा पालना गरेको हामीले रिपोर्टिङमा पाएका छौँ ।
तर स्वास्थ्यकर्मि, सुरक्षाकर्मी र हामी सञ्चारकर्मिहरु भने अाफ्नाे कार्यक्षेत्रमा नखट्ने हाेभने अाम नागरिकहरुकाे सेवा र सुरक्षा हुन सक्दैन । भनिन्छ नि, आफू नमरे स्वर्ग देखिदैन ।
भनाइको अर्थ, यदि यी तीनथरीका कर्मिहरु स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मि र सञ्चारकर्मिहरु घरबाट बाहिर ननिस्कने हाे र अाफ्नाे कार्यक्षेत्रमा नखट्ने हाेभने अाम नागरिकहरुकाे अवस्था के हाेला ? प्रश्न गम्भीर छ ।
काेभिड १९ नामक नाेबेल काेराेना भाइरसका कारण विश्व मानव समुदायको अवस्था यतिखेर निकै भयावह बनेको छ । काेराेना भाइरसबाट मर्ने र सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या हरेक मिनेट मिनेटमा द्रुतगतिमा बढदो छ ।
यस्तो कठिन परिस्थितिमा पनि अाफ्नाे ज्यानको कुनै प्रवाह नगरी नागरिकको शान्ति सुरक्षा र सेवामा अहाेरात्र खटिने यी तीनथरीका कर्मिहरुको अवस्था भने निकै कहालीलाग्दो छ ।
नेपाल सरकारका निजामती सेवाका कर्मचारी र अरुकाे तलवबाट केही रकम काटिनु त ठिकै पनि हाे ।
तर यसरी अाफ्जाे ज्यानै जाेखिममा हालेर दिनरात अाम नागरिकको सेवा र सुरक्षाका लागि बाहिर खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरुकाे तलबबाट केही रकम काटेको छ सरकारले । जुन अत्यन्तै दुखलाग्दाे र लाजमर्दो कुरा हाे ।
यस्तो अवस्थामा त विभिन्न तरिकाले यिनीहरूलाई अझै प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व होइन र हजुर ? मैले नबुझेको कुरा ।
हामी सञ्चारकर्मिहरुकाे त कुरै नगरौं झन् । खाएस पिएस तेरा घरमा, सुत्न आएस मेरा घरमा, भनेजस्तै छ । हुन त धेरै पत्रकारहरु घरभित्र छन् यतिखेर । कतिपय पत्रकारहरुले घरभित्र बसे तापनि आफ्नो काम गरिरहेका छन् ।
घर बाहिर कुदेर काम गर्ने होस् वा घरमै बसेर सूचना समाचारहरु सम्प्रेषण गर्ने सञ्चारकर्मिहरुकाे अवस्था निकै नाजुक छ र खतरामा छ । अनिश्चित पनि त्यत्तिकै छ । काम त गर्छन् तर सामान्य रुपमा बिहान बेलुकाकाे छाक टार्नकै पिरलोमा छन् उनीहरूले ।
र पनि धन्न जसोतसो आफ्नो काम कर्तव्य छाेडेका छैनन् । अरु सेवा सुविधाको कुरा त सपनाको कुराजस्तै भयो झन् ।
होइन के, हाम्रो सरकार यतिसारो गरिव छ र ? पैसा नभएकोले गरिव हो कि मानसिकता गरिव भएको हाेला ? बुझ्नै सकेको छैन हामी ।